Falcelinta Beesha Caalamka ee dagaalkii Muqdisho | KEYDMEDIA ONLINE
Falcelinta Beesha Caalamka ee dagaalkii Muqdisho
Midowga Afrika, IGAD, QM, Mareykanka, Imaaraadka iyo dalal kale oo katirsan Beesha Caalamka ayaa si isku mid ah uga falceliyay dagaalkii Muqdisho ka dhacay.
MUQDISHO, Soomaaliya - Waxay Beesha Caalamka ku tilmaantay dagaalladii ka dhacay Muqdisho Habeenkii Khamiista iyo Subixii Jimcaha wax laga xumaado oo nasiib darro ah in xiliga Soomaaliya dib ugu laabato meeshii laga keenay 30 sano kahor.
Xogyaha Guud ee QM António Guterres ayaa ugu baaqay dhinacyada inay muujiyaan isxakameyn, islamarkaana ilaaliyaan deganaashaha dalka, sidoo kalena wadahadal lagu dhameeyo khilaafka doorashadda.
Soomalaiya waxaa la filayay inuu Baarlamaanka uu 8-dii Febuary doorto Madaxweyne cusub oo bedelaya Farmaajo, balse dib ayay u dhacday doorashadda lawada sugayay, waxaana ka dhashay qalalaase siyaasadeed iyo hubanti la'aan mustaqbalka dalka.
Sidoo kale, Ururka Midowga Afrika ayaa qoraal kasoo saarey rabashadihii ka dhacay Caasimadda Soomaaliya, oo la sheegay inay ku dhinteen ugu yaraan 20 qof, oo shacab u badan.
Moussa Faki Mahamat, oo ah gudoomiyaha Gudiga Midowga Afrika ayaa ugu baaqey siyaasiyiinta Soomaaliya inay danta dalka ka hormariyaan danta qaranka iyo mida shacabka, islamarkaana ay miiska wadahadalka ku dhameeyaan khilaafka.
"Shacabka Soomaaliyeed mudo dheer ayay dagaallo kusoo jireen, wayna kasoo daaleen, waxay rabshadaha socda khatar ku yihiin qorshaha kala-guurka dalka iyo doorashadda," ayuu yiri Mousa Faki.
Mareykanka, Imaaraadka iyo IGAD ayaa baaqyo ku aadan joojinta rabashadaha soo saarey, iyagoo marna ka hadlay dagaalka uu hurinayo Farmaajo iyo sida sharci-darada uu ku joogo kursiga.